ULUHLOBISA NJANI LONKE UHLOBO LWETHEYIBHILE YOKWAMKELA - UKWAMKELWA KOMSITHO
Eyona Ukwamkelwa Komsitho Ungayihombisa njani iSidlo, iitafile zesikwere kunye nokujikelezwa kokujikeleza
Ungayihombisa njani iSidlo, iitafile zesikwere kunye nokujikelezwa kokujikeleza
Nokuba ujikeleze, isikwere okanye isitayile sesidlo, iitafile zakho zokwamkela kufuneka zincedise indawo yakho kwaye ufumane isitayile esifanelekileyo. I-Alixandra Gould Ifoto
Ngaphandle kwendawo yokwamkela ngokwayo, iitafile zakho ziya kudlala indima enkulu ekumiseleni umoya wombhiyozo wakho. Ngethamsanqa kuwe, iinkampani eziqeshisayo zephathi zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu betafile ukuze ukhethe iseti elungele indawo yakho. Ukusebenza ngebhola enkulu, esemthethweni enophahla oluphezulu kunye neefestile ezinkulu? Iitafile zesidlo ezinde kunokuba yile nto uyifunayo ukongeza ubushushu kunye nobukhulu. Ngaba unethemba lokudala isidlo sangokuhlwa esimnandi? Khetha iitafile ezijikelezileyo ngobukhulu obahlukeneyo kuseto olusondeleyo ngokukhawuleza. Funda malunga nendlela yokuhombisa kunye nokwenza uninzi lwetheyibhile nganye yokwamkela.
URachel Red Photography
Ke, uwile entloko phezu kwezithende kwigumbi elinophahla oluphezulu kunye neewindows ezingaphezulu ezifuna ukuzaliswa okunzulu. Sukuba nexhala- nantsi indlela yokubanxibisa u-T.
Cinga ngendawo yakho: Uphahla oluphezulu kunye neefestile ezisemgangathweni ziye kufune ukucinywa, kwaye iitafile ezinde kunokuba sisisombululo esifanelekileyo sokwenza ubunzulu kunye nokudlamka kwigumbi elingenanto. Cwangcisa iitafile zesidlo ezinde nezingaxutywanga kwimigca ecwangcisiweyo okanye ukwakheka oku-U, kwaye ujonge imigca yombala kunye nokuthungwa kuzisa igumbi lakho ebomini.
2. Sebenzisa ubude
Indlela entle yokunika iitafile zakho ezinde, ezimxinwa, ukuba zibonakalise imihombiso yeendawo eziphakamileyo ezahlukeneyo. Enye into phakathi kwee-vase ze-ceramic kunye namakhandlela amancinci amancinci, okanye uzame ubude, izitya zengxelo ezihamba kunye namakhandlela aphakathi kunye namancinci kunye neevoti ezincinci.
3. Dlala ngeMilo
Awunyanzelekanga ukuba uhlale kumacala onke, iipleyiti eziqhelekileyo. Isethingi okanye useto lwendawo eluxande olulinganisa ubume beetafile zenza ingxelo engathandekiyo.
4. Baleka ixesha elide
Yintoni onokuyifumana kwisithandwa sakho
Hlanganisa itafile ngokusebenza kwendawo ephakathi. Yongeza ubume ngokubeka imbaleki yemizobo phezu kwendwangu yetafile eqinileyo, okanye, ukuba awukho mkhulu ekuphindaphindeni kwiilineni, sebenzisa iimbaleki eziluhlaza eziluhlaza kwifama etafileni.
5. Ukusasaza Iinkcukacha
Itafile ezixande zineendawo ezininzi zokuzalisa. Thatha uxinzelelo kuwe kwaye ukhumbule ukuba awudingi ukugubungela i-intshi nganye. Thintela lo mbala ungaphezulu okanye isipha sokuhombisa ngokugxininisa kwiindawo ezimbalwa ezicwangcisiweyo: Yonwaba ngezihlalo eziqaqambileyo, ubeke umgca wetafile nganye ngeziphatho zezibane ezinde okanye uhambe ngesibindi kwimenyu yakho okanye kumakhadi eendawo.
ULacie Hansen Ukufota
Uyayithanda itafile ejikelezayo yeklasikhi? Hayi, awuhlali ngokwesiqhelo-kukho isizathu sokuba bayintandokazi yesihlwele. Ayisiyiyo kuphela iitafile ezijikelezayo ezibonelela ngezibonelelo ezilungileyo zokuncokola, kwaye akufuneki ukuba zilandele nayiphi na imigaqo. Banokubamba nge-mesh ngayo nayiphi na imeko. Nali iqhinga lokukhetha izinto phezulu: Yongeza umdla obonakalayo ngokudibanisa ubungakanani-umzekelo, ukutshintshana phakathi kwe-intshi ezingama-60 kunye nee-intshi ezingama-72.
1. Cinga ngeziThathu
Kulula ukuzibophelela kulungiselelo olunye, kodwa ukuba unethemba lokuqaqamba ngeenxa zonke, kutheni ungasebenzi i-trio? Ukuhonjiswa kwetafile yeklasta kunye nolungiselelo lwemibala efanayo kunye nobukhulu embindini wetafile yakho.
2. Musa ukoyika uMbala (kunye neepateni)
Ukuba ayenziwanga kakuhle, umhlophe kakhulu kunokuba yinto encinci. Sonke sinokuthi sifake iphalethi emhlophe ngentsimbi engathathi hlangothi, iipateni eziguqulweyo kunye nokuhanjiswa kwamehlo. Hlukanisa imijikelezo yakho kunye neendwangu zetafile ezimhlophe kunye neenkcukacha ezifana nezitulo zegolide, i-cutlery ye-copper, i-quilted okanye i-eyelet, kunye neentyatyambo ezizodwa.
3. Cinga kancinci
Kukho into enokuthethwa malunga nesimbo esingaphantsi-ucinga ukuba iindwendwe zakho aziyi kuqaphela, kodwa ziya kujonga. Iinkcukacha ezifihlakeleyo zihlala zenza umboniso omhle ngokungalindelekanga. Ilungiselelo elihle leentyatyambo, okanye ezintathu okanye ezine ezincinci, kunye namakhandlela ambalwa okuvota, iigobolondo zolwandle okanye ezinye iinkcukacha ezikumxholo zinokuba kukuchukumisa nje.
4. Yinike umda othile
Yazisa iipleyiti eziziingxande kunye nezikwere okanye ezinye izinto zokuhombisa ukongeza ii-angles ezingalindelekanga, ii-angles zangoku kuseto oluqhelekileyo.
5. Yibeke phezu
Akukho mntu uthi ufuna ukumanzisa iitafile zakho ngombala oqaqambileyo ukuba awufuni-zikho ezinye iindlela zokwenza i-jazz itafile ejikelezayo yendabuko kunye nesikimu sombala ongathathi hlangothi. Ukuba ufuna ukubonakala okucocekileyo kunye neklasikhi, yiza nokuthambeka ngokusebenzisa iipateni ezinjengeedamask, iintyatyambo okanye imivimbo kwinyosi yendlovu okanye igobolondo leqanda.
Isikwere kunye neeTafile eziXande
Iitafile zesikwere kunye ezimfutshane zoxande zinokusebenza ngokumangalisayo kwindawo yepati engacaciswanga kakuhle-mhlawumbi umtshato wakho usebaleni okanye kwipatiyo, okanye phantsi kwentente esidiliyeni. Ukuseka imida kudala imeko yendawo, kwaye iitafile zesikwere zihlala zikhohlisa. Akunyanzelekanga ukuba uzidwelise ngendlela onokuyenza ngayo kwiitafile zesidlo-ubuhle bokusebenza nezikwere yinkululeko yokuzilungiselela ngeekona ezahlukileyo zesithuba sokwamkela esinamandla.
1. Yongeza okusesikweni
Njengokuba ungafuni ukugcwala iitafile zakho, ukubuyela umva akusoloko kulungile: Ukuveza imiphezulu kunokusetha ithoni xa ungalumkanga. Oyena nobangela? Indwangu yetafile emfutshane kakhulu. Iilinen zomgangatho wobude bomgangatho phezu kweetafile zakho zesikwere ukunxiba kwangoko indawo yakho.
2. Sebenzisa inani elilinganayo lezihlalo
Izikwere zimilo eziqinileyo, kodwa zifuna ulingano, ke beka inani lezitulo kuwo onke amacala. Ngaphandle koko uya kushiyeka ungalunganga, amalungiselelo etafile angacacanga
3. Zijikeleze izinto
Faka ii-accents ezijikelezayo ukuthambisa imiphetho. Izinto onokukhetha kuzo azinasiphelo apha: Beka iivoti kunye neetshaja ezijikeleze iitafile — jonga iizilebhu zomthi kunye neecasters zomxholo we-rustic okanye iitreyi zemarble ezigudileyo zomoya opholileyo, wangoku- kwaye unqumame ukukhanya kwesetyhula okanye kweesilinda.
Fumana ngakumbi imibono yokuhombisa yokwamkela kunye nenkuthazo kanye apha.
xa uzithumela nini izimemo zeshawari yomtshato
uthando lwenzelwa wena nam
isipho sokuzalwa somyeni emva komtshato
Iminyaka eli-11 yesipho semveli
iingoma utata evela intombi yakhe